दूर्जेय चेतना: June 2009
मन र निदाएका बुध्द
जब मनहरु आतड.कित हुन्छन तब हरेक पटक नजानिदो तान्द्राको भरमा आफूलाई उभ्याउन र शान्त पार्न खोज्छ। अनेकौ पिडा र खुशीहरु फुकाउनै नमिल्नेगरी अल्झिएको गाठो होला सायद यो मन। जति तन्काए पनि तन्किन्छ, जति छोट्याए पनि छोट्टिन्छ तर फुकाउन खोज्यो मात्र निरर्थक।
कसरी हुन्छ शान्त?, के ले होला आफ्नो उद्धार? स्बयमको उद्धारमा लाग्ने बानि मै समय खेर गईरहेछ। सोच्ने बानि मै र आफै भित्रको द्धन्दले कता कता मन प्लवन हुन्छ अनि नजानिदो पाराले पलायन। जति तरल भएपनि आशाहरु र जिज्ञाशाहरु बग्नै मान्दैनन्, मानौ न्यून तापमानमा जमेको छ मन्। आगो लागेको छ, धुँवा निस्केको छ र मनको राप बाहिर सम्म निस्केको छ, त्यै पनि किन मन अनि आशाहरु जमिरहेका छन् ? सोच्न बाध्य भएर कयौ चोटी आफैलाई सोधेको छु वा भनु झड्कारेको पनि छु तर फगत अनुत्तरीत मनहरु।बिना सिमाना, बिना परिधि, त्यसै त्यसै निश्चित दाएरामा बाधेर मनहरुलाई घस्याउन खोज्छु ताकि शान्त होस र मनग्यै अघाएर बसिरहोस् । तर पनि ईच्छाहरु निश्चित आकारमा बस्नै मान्दैनन् । मन अब मनहरु भईसके सायद ‍भिन्न भिन्न परिधिमा छन् अब तै पनि निदाएका छैनन् ।
एकमात्र हैन, अनेकन रुपमा मनहरु रोएका छन् । अभाबले, अज्ञानताले, बन्दूकले, तातो गोलीले, दबाबले, मजबुरीले, पिडाले, बिछोडले, गुलामीले, बन्दले, हड्तालले, भ्रष्टचारले, अपराधले,हत्याले, बलत्कारले,।।।उफ!! कति हो कति। कयौ पटक मनहरु उत्तर पाउने आशामा यिनै बीच रुमलियो। तर अभाब देखी, गुलामी हुदै बलत्कार सम्म कतै छैन उत्तर। जि ज्ञाशामै आफै रुमलिएर बसेको मन र नजानिदो पिडाहरुले कतै पाएको छैन यसको उत्तर तर पनि खोजिरहेको छ र बस् खोज्दै छ।
पिडा पछिको पिडा, रोग पछिको रोग, समस्या पछिको समस्या कत्तिको दर्दनाक हुन्छ सोच्नै सक्दिन तर पनि आशाहरु छन् मेरो मन भित्र। आशा र निराशा सगै यी मनहरु सोच्न थाल्छन र टोलाउछन्। कतिखेर निदाउछ थाहै पाउदैन र सपनाको रँगमञ्चमा आफूलाई दर्शक बनाएर हेर्न पुग्छ्। रँगमञ्चमा कलाकारहरु कथासगै अगाडि बढेका हुन्छन् र अन्तिममा बुध्द निदाएको दृष्य सगै रँगमञ्चको पर्दा बन्द हुन्छ। पर्दा बन्द हुदा नहुदै आँखाहरु खुल्छन फेरि उहि कथा !! उहि परिदृष्य !! उहि घटनाक्रम। सायद हामिले रोजेको र अन्त गर्न नचाहेको कथा हो यो।
Posted by दूर्जेय चेतना at 5:59 PM
दिलिपजीका लघुकथाहरु आँफैमा अतीनै सुन्दर र यथार्थ परक हुन्छन। यसो हुँदा हुँदै पनि आज एउटा कथामा रिमिक्स गर्न मन लाग्यो। राम्रो होला वा नहोला तर मलाई लाग्योकी गोरखापत्रमा(२५-०२-२०५८)त्यो बेला यो कथा प्रकाशित हुँदा र अहिलेको परिस्थिती फरक छ। अनी केही थपेर यहाँ राखेको छु। लेखकको बिचारको उच्च कदर गर्दै; यसलाई साधरण रुपमा र रमाइलोको रुपमा लिनु होला।
तर समयले कोल्टे फेर्यो, देशको स्थिती र सामाजिक परिबेश निन्तान्त फरक हुँदै आयो। आर्थिक संकटको बाबजुत ,सबै को हातमा मोबाइल फोन भयो, र कानुनी उपचार गाँउ गाँउमा हुँन थाल्यो र राज्यको कानुन कसैको सरोकारको बिषय भएन शायद। यस पटक न पसल खुला थियो न त कुनै साईनबोर्ड। खियालागेर प्वाल परेको सटरको बिचमा साईनबोर्डको नाममा लेखिएको थियो "टु-लेट"। मलाई अचम्मै लाग्यो र पल्लो पसलमा सोधे अनी पत्ता लाग्यो कि उनीहरु त पासपोर्ट बनाउन जिल्ला तिर लागेका रहेछन् । सबैलाई चेतना भया..................
वास्तविक कथा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
Posted by दूर्जेय चेतना at 10:48 AM
मानेको छैन मन तैपनी बिस्तारै भुल्दै छु
मनमा के के आयो आयो। के हो र के हैन? कस्तो भएको छ र कस्तो भएको छैन? किन र कसरी ? त्यस्तै त्यस्तै भयो यो मन। मनको नजानिदो चालले कता कता पुरानो घाऊ लाई दर्खरायो, पिडा त्यसैबाट बगेर आयो अनी थाम्न खोजे, समालिन खोजे र आफुलाई फगत थुम्थुमाएर राखे। अनेकौ रुपमा पिडाहरु बल्झिन्छन् बिना कारण र बिना रुपमा। कती त समालिन पनि सक्छन् तर कती समालिन खोज्दा खोज्दै पोखिन्छन्। जिबनमा हरेकको आफ्नो आफ्नो भोगाइ, आफ्नै अनुभबहरु र आफ्नै तरिका हुन्छ जिउने तर हरेकले आफुलाई पिडा भन्दा माथि राख्न खोज्छ। तर म अलिक निरपेक्ष भएको छु, पिडा र सुखको एक अतभुत चाहना भएको छ एकैसाथ। "माया नगरु तिमी रिसाउने पीर, गरुम तिमीलाई पिडा हुने पीर".............
चाहेको छैन तैपनी सम्झेको छु
मन भरी पिडा छ तैपनी हाँसेको छु
समालिन खोज्छु तैपनी छरपस्ट भएको छु
नपिउन खोज्छु तैपनी मातेको छु
मानेको छैन मन तैपनी बिस्तारै भुल्दै छु ।
रोएको छैन मन तैपनी आँसु झारेको छु
च्यातिएको छैन मन तैपनी टालेको छु
आत्तिएको छैन मन तैपनी समालेको छु
बिलाउन खोजेको छु तैपनी बाचेको छु
थामिएको छ सास तैपनी फेरेकै छु
खुट्टाहरु बाधीएका छन् तैपनी हिंडेकै छु
सून्य भएको छ मन तैपनी भावहरु अंगालेकै छु
जोडिएको छैन मन तैपनी यान्त्रिक बनाएको छु
झिरले रोपेको छ मुटु तैपनी चलाएकै छु
सधै नउठ्न खोज्छु तैपनी बिहान उठेकै छु
नसम्झन खोज्छु तैपनी सम्झीराखेको छु
दौडिएको छैन मन तैपनी बिश्राम लिएको छु
किनकी........................तिमी हाँस्दा मलाई बिर्सियौकी भन्ने पीर, तिमी निरास हुँदा मलाई सम्झेर दु:खी भयौकी भन्ने पीर..........ल हेर्नुस त कस्तो छ यो मन ।
Posted by दूर्जेय चेतना at 10:44 AM